Ihe njikwa akaụntụ Fortnite 2020: Otu esi enweta Skins & Battle Pass na Fortnite? - V na-akwụghị ụgwọ n'efu
A akpụkpọ Fortnite bụ uwe ị nwere ike irite ma ọ bụ zụta na Fortnite. N'ụzọ bụ isi, ọ bụ ụzọ iji mee ka mmadụ mata onye ọzọ. Nke ahụ kwuru, ọ naghị enye ndị egwuregwu ihe ọ bụla nwere atụmatụ ọ bụla ma ọ bụ asọmpi. Ana enweta ya n'ihi ihe ịchọ mma. Ọ na-enye mkpụrụedemede egwuregwu pụrụ iche n'ụdị ejiji, na-eduga n'ọ enjoymentụ karịa. Nke ahụ kwuru, ụfọdụ skins siri ike ịchọta ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ. Nothapụ ikwu na ndị mmadụ anaghị echefu itinye ego ha tara ahụhụ na akpụkpọ Fortnite. Eziokwu ị na-agụ nke a na-agwa anyị na ị nwere mmasị ịnweta akpụkpọ Fortnite, mana na-enweghị ego ị ga-eji emefu ego. Yabụ, kedu ka ị ga - esi nweta skins nke Fortnite?
1. Free Gennites Nnukwu Ahụhụ Free Gennite
N’ikwu eziokwu, ọbụlagodi na ị bụ onye na-agbakọ akụkọ niile metụtara Fortnite, ị gaghị achọta ozi na ya skins free nke Fortnite, na -eme ka ọ bụrụ ihe na - agaghị ekwe omume ịchekwa ha n'emeghị ihe ọ bụla. Akpụ akpụkpọ anụ Fortnite bụ naanị ihe bara uru nke enwere ike ịtụle n'elu ebe a iji nweta skins Fortnite na-enweghị ihe ọ bụla maka obere akpa gị. Nke ahụ kwuru, ọ bụ ihe dị na ya ịchọta ezigbo jenerato nke okike a n'ọtụtụ nke aghụghọ Ndị na-eweta akaụntụ akaụntụ Fortnite pụọ. Ma ozo ozo, igaghi echegbu onwe gi banyere nke a n'ihi na anyi ahula diamond na nsogbu. Tupu anyị agwa gị ọtụtụ ihe gbasara ịchọta akụ anyị, ka anyị kpughee ụfọdụ ọrụ dị iche iche nke inweta onye na-ere Fortnite n'efu.
Abamuru nke Free Fortnite Skin Generator
Kwere ma ọ bụ na ọ bụghị, ọtụtụ ndị egwuregwu, ọkachasị ụmụaka, na-eche na ha enweghị ego ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịkwụ ụgwọ akwara akwụ ụgwọ. A sị ka e kwuwe, a na-elekarị akpụkpọ Fortnite anya dị ka ihe nnọchianya bụ isi, n'ezie, n'ime egwuregwu ahụ. Dị ka e kwuru na mbụ, ịzụta skins abụghị ihe a na-eme. Ọ dịghị enye ọ bụla iche iche egwuregwu na egwuregwu. Nke ahụ kwuru, ma ọ bụrụ na ị nwere anụ ahụ na-adịghị ahụkebe, ndị ọzọ ga-eche ozugbo na ị mara ezigbo mma na egwuregwu ahụ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na i jiri otu ụdị akpụkpọ anụ egwuri egwu, ndị ọzọ nwere ike ghara iwere gị kpọrọ ihe, na-eche na ị dịghị mma egwuregwu ahụ.
-A na-enye gị skins n'efu, Fortnite na-emepụta anụ ahụ na-eme ka ị yie onye ọkachamara n’anya ndị egwuregwu ndị ọzọ. Nke a ga - eme ka obi dị gị mma, ọkachasị ma ọ bụrụ na emere gị ahụ erughị ala mgbe ị na - eji akpụkpọ anụ arụ arụ ọrụ.
- Buru n'uche na akpụkpọ Fortnite efu ga-emekwa ka ike gwụ ya. Ndị egwuregwu Fortnite na-ahụkarị nwere ike ịmara otu esi agba agba agba ọsọ na-eji otu agwa na akụrụngwa egwu oge niile.
-Acha skins adịghị abịa ọnụ ala. Ha na-akwụ ihe ruru $ 20, nke pụtara na ọ gaghị adị mfe na obere akpa onye ọ bụla. O doro anya, ezigbo anụ na -emepụta akpụkpọ ahụ na-ewepụ mkpa ọ dị itinye ego na ịzụrụ n'ime egwuregwu.
-Anweta Fortnite anụ ahụ na-ajụ ajụjụ dị mfe iji rụọ ọrụ. Nke jọgburu onwe ya, nwatakịrị dị afọ asatọ ga-enwe ike iji ngwa a n'efu site na isoro ntuziaka ndị dị mfe enyere na peeji nke ụlọ.
Etu esi eji azumahia akpụkpọ anụ Fortnite efu?
Dịka m kwuru na mbụ, ọ bụ ije n'ime ogige iji rụọ ọrụ jenerato a. Ọ bụrụhaala na ị nwere PC na njikọ Internetntanetị, ị dị mma ịga. Ka anyị leba anya n’usoro nke generator a na-arụ ọrụ. Iji bido, ị ga-abanye idị njirimara gị yana ọnụ ọgụgụ skins ịchọrọ, wee pịa bọtịnụ mgbapụta ahụ. Ngwá ọrụ ahụ ga-arụ ọrụ ozugbo iji nye gị akpụkpọ ahụ Fortnite achọrọ. N'ụzọ bụ isi, akpụkpọ anụ Fortnite ahọpụtara ga-apụta na ụlọ ahịa gị n'ime nkeji. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-ele anya otu akpụkpọ Fortnite ogologo oge, ị ga - emecha nweta ya maka efu efu. Kasị njọ, onye na-emepụta Fortnite a dị mma nke na ọ ga-eme gị anyaụfụ nke ndị egwuregwu Fortnite ndị ọzọ niile. Ọ bụ ezigbo olileanya kacha mma maka ndị na-achọ agụụ anụ ahụ Fortnite na-eri ogologo oge.
Ọ dị mma iji jenerato anụ ahụ?
Iche echiche otu ebe: ọ bụghị ha niile dị mma. N'ezie, ọtụtụ n'ime ha abụghị. Maka ndị na-amaghị, ebudatala egwuregwu ahụ ihe karịrị otu narị nde, nke kwesịrị ịgwa gị otu o si ewu ewu, na-eme ka ndị egwuregwu ya bụrụ ihe a na-apụghị izere ezere maka ndị scammers. Dika igwa ikwu, nke a na - achọ oke ịkpachapụ anya ka ọ ghara ịhapụ ndị scammers na - enweghị obi eziokwu, ndị na - achọ iduhie ndị mmadụ na ntụgharị nke ịnye Fortnite Generator na ihe ndị ọzọ metụtara egwuregwu ahụ.
Nke ahụ kwuru, Fortnite Generator na mkparịta ụka ahụ bụ nrọ onye ọkpụkpọ n'ihi na ngwá ọrụ ahụ bụ 100% enweghị nchebe ma nwee egwuregwu, na-ewepụ mkpa ịchọ ihe ọzọ nke ọdịdị a. Buru n’uche na ị ghaghị inye kaadị kredit gị ma ọ bụ ozi ego ọ bụla ọzọ iji jenerato a. Na mgbakwunye, agaghị agwa gị ka ị wụnye ihe ọ bụla na PC gị. Ikwesighi ikwenye ozi nkeonwe ma ọ bụ paswọọdụ gị. N’ezie, ịkwesịrị ịnye aha njirimara gị maka onye na-emepụta ihe maka ịmịnye ebe a ga-enye anụ ahụ Fortnite, nke na-etinye gị n’enweghị nsogbu ọ bụla. Ihe niile kwuru ma mee; ọ bara uru n'ezie na ịhụ ihe nchọpụta a na - adịghị ahụkebe.
Enwere onye nwere ike iji Gennite Generator a?
Fọrọ nke ọma, onye ọ bụla na-egwu Fortnite nwere ike iji ngwá ọrụ a. Enweghị afọ ma ọ bụ enweghị njedebe mba. Ebe ọ bụ na onye na-ere ahịa na-akwụghị ụgwọ, ị gaghị echegbu onwe gị maka usoro ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ ihe dị otu ahịrị. Na nke a, ọ dakọtara na sistemu, ọ na-enyere gị aka iwepụta anụ Fortnite site na ngwaọrụ niile eji egwu Fortnite. Nothapụ ikwu na ngwá ọrụ ahụ dịkwa mfe iji. Nke kachasị mma, ọ na-arụ ọrụ na-enweghị nkwenye mmadụ ọ bụla, na-ewepụ ókè niile maka ịnweta. Na ngụkọta, jenerato ahụ emere nke ọma maka ebumnuche ya eji ya.
Ogologo oge ole ka m nwere ike iji Gennite Generator a?
Igwe a na - ere ọkụ a anọwo ogologo oge, na-egosi na ọ bụ eze nke oke ọhịa n'ihi na a na - agbada ngwa ngwa ndị na - ewepụta ụdị okike a. Nke ahụ kwuru, enweghị nkwa ọ bụla na onye na-ere ọkụ a ga-adigide ruo mgbe ebighi ebi. Nke a bụ eziokwu na ihe ọ bụla ọzọ jenerato si n'ebe. E kwuwerị, ọtụtụ ndị na-akpata Fortnite na-emetụta ego ndị ụlọ ọrụ egwuregwu na-enweta na oke. Ozi ọma ahụ bụ na ụlọ ọrụ egwuregwu ahụ enweghị ike ịkọ ngwa ngwa ma ndị egwuregwu ejirila jenerato ọ bụla iji nweta akpụkpọ Fortnite. N'ihi nke a, ndị egwuregwu agaghị abata n'okpuru radar. Ndị na-eme ihe na -emepụta ihe na-eji ngwa ngwanrọ eme ihe nke na-eme ka ọrụ ahụ rụọ ọrụ na-azụliteghị ọkọlọtọ ọ bụla.
N’ezie, ihe a niile bụ eziokwu naanị ma ọ bụrụ na ị na - eji igwe na - ere ọkụ nke ziri ezi. Dịka e kwuru na mbụ, enwere ọtụtụ ọghọm Fortnite na-ekwesịghị ekwesị n'ahịa. Ọ bụghị na-ekwuru; Ikwesiri ka ha zere ha, ma obu ihe ozo, i gha na ari Ọ bụghị naanị na ị na - etinye ihe egwu nke ịhapụ akaụntụ Fortnite gị, mana ozi onwe gị na ego gị nwekwara ike ịnọ n'ihe egwu. Ihe ọ bụla ọzọ edobere iji nweta akpụkpọ ahụ n'efu ga-emebi. Idobe ihe nfe; atụkwasịla obi na ngwá ọrụ Fortnite ọ bụla chọrọ ka ị nyefee ozi gbasara onwe gị / ego gị. Ọ gwụla ma ị kwenyesiri nzere nke 100 nke jenerato, egbula okwukwe.
2. Free Gennite Battle Pass Generator
Fortnite akpụkpọ ewepụta, enwerekwa jenerato nke ga - enyere gị aka inweta ngafe agha Fortnite. Maka ndị na-amachaghị njem esi aga, ọ na-ahapụ gị ịmeghe ọtụtụ ihe maka agwa gị, dị ka uwe, egwu, emotes, na ọtụtụ ihe ịchọ mma dị iche iche nwere ike ime ka egwu Fortnite na-atọkwu ụtọ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ, ọ bụla n'ime nkwalite ndị a ga-akpali gị n'ihu na egwuregwu ahụ n'onwe ha, mana ha bụ ihe mgbakwunye na-atọ ụtọ maka ịhazi agwa gị. Site na inwere ogba agha gafere Fortnite agha jenerato, ahụmịhe egwuregwu gị ga-atọ ụtọ nke ukwuu ma na-akwụghachi ụgwọ dịka ọ dịtụbeghị mbụ.
Kedu ihe kpatara Họrọ Gennite Battle Pass Generator a?
Ka anyi che ya iru; ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị ọgba ọsọ Fortnite na-agafe agafe anaghị arụ ọrụ na 2020. Ọtụtụ n'ime ha aghọọla ndị na-enweghịzi ikike. N'ikwu eziokwu, ụlọ ọrụ egwuregwu gbadara ọtụtụ n'ime ha, mgbe ebidogogo isi mmalite egwuregwu agha n'efu. Ihe na-esetịpụ jenerato a tụrụ aro ka a jụọ ajụjụ ndị a bụ na eziokwu ahụ bụ na onye na-ewepụta ọkụ a na-arụ ọrụ na nzuzo na-enweghị ndị na-eme egwuregwu ahụ. Nke kachasị mma, ọ na - arụ ọrụ maka gị na - enweghị itinye ihe ọ bụla ma ọ bụ nye ozi ọ bụla enwere ike iji megide gị. Na mgbakwunye, ọ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ọbụna na 2020, mgbe ngwaọrụ ndị ọzọ yiri ya nke ọdịdị a akwụsịla ịrụ ọrụ.
Ebumnuche niile a tụlere n’elu; onye na - ere ọkụ a kwesịrị ịbụ nke onye ọ bụla na - achọ ịlụ ọgụ ọ na - enweghị nsogbu. Kpọrọ ihe, mmadụ enweghị ihe ọ bụla ga-efunahụ ya site na ịgbanye ngwa ọrụ a emere nke ọma, nke na-egosi na ọ ga-ekwe omume inweta free Fortnite Battle pass ọbụlagodi na 2020. Buru n'uche na ụlọ ọrụ egwuregwu buru ibu ekechiwo eriri ha, na-eme ka o siere ndị na-emepụta Fortnite ike ịbawanye n'ahịa. Yabụ, anyị nwere nkwanye ugwu dị elu maka ndị na-eme juputara a n'ihi na jenerato a bụ ihe ziri ezi, ọ gbabeghịkwa mgbe ọ bụla, n'agbanyeghị gburugburu gburugburu. N’ezie, ndị na-eme igwe na - emepụta igwe na - ere ọkụ kwesịrị ka e nye ha ihe nzụlite ha maka ịbịakwute igwe na - ebido jikọtara ọnụ.
Etu esi eji Generator maka ngafe agha agha n'efu?
Ojiji nke igwe na - ere ọkụ a bụ ihe kwụ ọtọ ka ọ nwere ike ịnweta. N’ikwu eziokwu, ọ na-arụ ọrụ otu ahịrị dị ka jenerato maka akpụkpọ anụ Fortnite. Ihe ị ga - eme bụ ịnye ụfọdụ ozi dị mkpa, mgbe ahụ, jenerato ga - ebutere gị ịgafe agha n'ime oge ole na ole. Ozi gbasara ya anaghị eme t pụtara na ị ga-enye ozi nkeonwe gị. Simply ga-enyerịrị aha njirimara gị. Kwado ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ịrụ ọrụ a bụ ihe dị mfe dịka ọ na-ada. Akụkụ kachasị mma bụ na jenerato a na-arụ ọrụ 24/7, ma ọ bụ n'efu iji ya. Ya mere, anyị na-akwado jenerato Fortnite a n'enweghị ihe mgbochi ọ bụla.
Edokwala ụzọ ezighi ezi nke iji jenerato eme ihe n'ụzọ ọ bụla. Buru n’uche na onye na-ere ọkụ n’etinye ụdị okike a siri ike ịchọta n’oge nke oge a, ọkachasị n’afọ 2020. N’ihi ya, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji amamihe jikọtara Fortnite jenerato. Ọzọkwa, ejikwala ngwá ọrụ ahụ eme ihe. Agaghị atụ aro ka eji ya rụọ ọrụ kwa ụbọchị. Kama nke ahụ, ịkwesịrị iji ya ruo oge ụfọdụ. N’ụdị dị otu a, ị ga - eji zere flags niile nwere ike itinye akaụntụ gị n’ihe ize ndụ. Nke ahụ kwuru, onye na-emepụta ahụ na-arụ ọrụ na-amaghị ama iji hụ na ozi akaụntụ gị anaghị emebi iwu ọ bụla. Ma mgbe ahụ, ị ​​ga-akpachapụrụ anya site na njedebe gị ka ị nọrọ ebe echekwabara. Nke a ga - eme ka ị nwee ọ enjoyụ egwuregwu a zuru oke site n'inweta ngwaọrụ ụlọ n'efu na akwụghị ụgwọ obere akpa gị.
O nweghi egwuregwu ọ bụla nke kere ihe dị ka Fortnite, na-amanye ndị egwuregwu ka ha mefuo ego dị ka nzuzu na ihe egwuregwu .Eghachite akụkọ ndị a pụrụ ịdabere na ya, nkezi onye ọkpụkpọ Fortnite gbara ọnụọgụ $ 85 n'ihe dị iche iche dijitalụ dị iche iche dị ka anụ ahụ, ngafe agha, mgba ọkụ, were gabazie. Ozi ọma ahụ bụ na ugbu a ịmara na enwere Fortnite generator ga-eme ka ị nweta anụ akpụkpọ Fortnite na ọgụ ga-enweghị na-eri gị ihe ọ bụla. Akụkụ kachasị mma bụ na ngwaọrụ ahụ na-arụ ọrụ ebube mgbe niile. Mana mgbe ahụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji ya ugbu a ma ọ bụghị mgbe e mechara n'ihi na ụfọdụ sknite nke Fortnite dị naanị maka obere oge dị ka akụkụ nke ezumike ma ọ bụ ihe omume. Ọ bụrụ na akpụkpọ ahụ ị na-achọ apụ apụ, ọ nwere ike ịlaghachi azụ, ma ọ bụ nwee ike ichere ogologo oge ka ọ nwee ike ịlaghachi. Ya mere, dịrị njikere ibido egwuregwu gị na Fortnite dịka ọ dịtụbeghị mbụ site na ịme ihe ugbu a!